၂၀၁၉ ထိ ဒါတွေကို သယ်ဆောင်မသွားပါနဲ့ ! – Trend.com.mm
Posted on December 13, 2018 by Noel
Trend ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီလက ဒီဇင်ဘာဆိုတော့ နှစ်သစ်ကိုရောက်လုနီးပါးဖြစ်နေပြီနော်။၂၀၁၉ ကိုမရောက်ခင် ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ ချန်ထားခဲ့ချင်တဲ့အရာလေးတွေမရှိဘူးလား?? ဥပမာ ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်ခုခုပေါ့
အခု Trend ကိုအားပေးနေတဲ့စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဘ၀ထဲကနေ ဖယ်ကိုထုတ်ထားသင့်တဲ့ ၂၀၁၉ ထိသယ်ဆောင်မထားသင့်တော့တဲ့အရာလေးတွေကို ပြန်ပြီးပြောပြမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဘာတွေလဲဆိုရင်…
ဆိုရှယ်မီဒီယာလောကကို တအားဖက်တွယ်မိနေတဲ့အခါ အပြင်လောကနဲ့အဆက်ပြတ်သွားတတ်ပါတယ်။အပြင်လောကက မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ၊မိသားစုတွေနဲ့ရင်းနှီးမှုကိုလျော့သွားစေပါတယ်။အဝေးရောက်နေတဲ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ သေချာအသုံးမချတတ်ရင် ကိုယ့်ဘက်က ဆုံးရှုံးမှုတွေကပိုများပါတယ်။ဒီတော့ ဖုန်းမှဖုန်း၊ဖေ့ဘွတ်ခ်မှဖေ့ဘွတ်ခ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်လေးကို ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ချပြီးလက်တွေ့ဘ၀ကလူတွေကို ပိုပြီးအချိန်ပေးကြည့်ပါ။သင့်ရဲ့ ၂၀၁၉ က ပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။
လူတိုင်းမှာ မနာလိုတဲ့စိတ်ကတော့ တစ်ခါတစ်လေဖြစ်တတ်ကြတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ သူများကို အလွန်အကျွံမနာလိုဖြစ်၊မကောင်းပြောတဲ့အထိ မဖြစ်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါနော်။သူများကို မနာလိုဖြစ်တာက ကိုယ့်စိတ်လည်းပင်ပန်းပြီး တစ်ခြားသူအမြင်မှာလည်း ကိုယ်က သဘောထားသေးသိမ်တဲ့သူ၊မပေါင်းသင့်တဲ့သူဖြစ်သွားစေပါတယ်။သူများကို အားကျမနာလိုဖြစ်ပြီး လိုက်မပြိုင်ပါနဲ့။ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်သာ ယှဉ်ပြိုင်ပါ
စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ၂၀၁၉ ထိ အပါမခံပါနဲ့။စိတ်ဖိစီးမှုဟာ ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးကိုသာပိုဖြစ်စေတာပါ။ဒါကြောင့် ဒီနှစ်မကုန်ခင် စိတ်ဖိစီးမှုတွေမ၀င်လာအောင်၊သူတစ်ပါးရဲ့ မကောင်းတဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုလျစ်လျူရှုနိုင်အောင် နေကြည့်ပါ။စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာ မရှိဘူးမဟုတ် ရှိလာ၊ကြုံလာရဦးမှာပါပဲ၊ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က ထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ညဘက်ဆိုပုံမှန်အိပ်ပေးတာ၊လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်တာ၊စာဖတ်တာ၊တရားထိုင်တာစတာတွေကလည်း စိတ်ဖိစီးမှုတွေမ၀င်လာအောင်ထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။
ဖက်ရှင်ဆိုတာ အမြဲတမ်းအပြောင်းအလဲရှိနေပြီး ဆန်းသစ်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့ ပေါ်သမျှတော့လိုက်ဝယ်နေလို့မရပါဘူး။ကိုယ့်ဆီမှာရှိနေတဲ့အ၀တ်အစားပုံတုံးတွေကို ရောင်းတန်ရောင်း၊ပေးတန်ပေးပြီး ကိုယ်နဲ့တကယ်အံဝင်ခွင်ကျ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမယ့် အ၀တ်အစားမျိုးကိုရွေးချယ်
၀ယ်ယူပါ။တစ်ခါတစ်လေ လှလို့ဝယ်လိုက်ပေမဲ့ ကိုယ်နဲ့မလိုက်ဖက်တာ၊သက်တောင့်သက်သာမဖြစ်တာတွေရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးကျ ငွေကုန်တာပဲအဖတ်တင်မှာပါ။ဒါကြောင့် ဖက်ရှင်ကိုလည်းအမှီလိုက်လို့ ပုံတုံးတုံးတွေထားပစ်ခဲ့ဖို့လိုပါတယ်။အ၀တ်အစားလှလှလေးတစ်စုံက သင့်ကိုပိုပြီး
ကိုယ့်ဘ၀ထဲမှာရှိနေမယ့်လူတွေဟာ နည်းပါစေ တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေချည်းပဲဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။အပေါင်းအသင်းသူငယ်ချင်းတွေများတော့များပါရဲ့။တကယ်တမ်းကျ ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းတဲ့သူတွေက ၁၀ယောက်မှာ၈ယောက်လောက်ဖြစ်နေရင်…။တကယ်တမ်းကိုယ့်အပေါ် ဘယ်သူက စစ်မှန်တယ်ဆိုတာ ခွဲခြားတတ်မှာပါ။အားနာမနေပဲ ဘ၀ထဲက ထုတ်ပစ်ခဲ့ပါ
ကိစ္စတစ်ခုခုကို အသင်းအဖွဲ့နဲ့လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ အမှားအယွင်းတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်လာရင် ဒါက အားလုံးရဲ့ အမှားပါပဲ။ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းလွတ်ရင်ပြီးရောတစ်ခြားသူအပေါ်အပြစ်ပုံချတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။အဖွဲ့အစည်း၊အသင်းအဖွဲ့နဲ့လုပ်တဲ့အခါ တာဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်ရှိတာက ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ပါပဲ။ဒါကြောင့် ကိုယ်က ကြောက်လို့ဖြစ်စေ၊အပြစ်လွတ်ချင်လို့ဖြစ်စေ သူတစ်ပါးအပေါ်အပြစ်ပုံချမိတဲ့စိတ်မျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် ၂၀၁၉ ထိဒီစိတ်ကို မသယ်ဆောင်သွားပါနဲ့တော့။ကိုယ့်ရဲ့ တာဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်က ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုမြင့်တက်စေမှာပါ။
လူတိုင်းကတော့ ကိုယ်နဲ့မရင်းနှီးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာ၊ကိုယ်မသိတဲ့နေရာဒေသကိုပထဆုံးသွားရမှာ စိတ်လှုပ်ရှားတတ်၊ကြောက်တတ်ကြတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီကြောက်တဲ့စိတ်ကို တတ်နိုင်သလောက်လျှော့ချပြီး ဘ၀ရဲ့အတွေ့အကြုံသစ်တွေကိုယူကြည့်ပါ။ကြောက်စိတ်ကနေ ရအောင်
ရုန်းထွက်ကြည့်ပါ။သင့်ကိုတကယ်ပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာက ဘာလဲဆိုတာ ရှာဖွေကြည့်ပါ။
Trend ပရိသတျကွီးရေ ဒီလက ဒီဇငျဘာဆိုတော့ နှဈသဈကိုရောကျလုနီးပါးဖွဈနပွေီနျော။၂၀၁၉ ကိုမရောကျခငျ ဒီနှဈထဲမှာပဲ ခနျြထားခဲ့ခငျြတဲ့အရာလေးတှမေရှိဘူးလား?? ဥပမာ ကိုယျ့ရဲ့မကောငျးတဲ့အကငျြ့တဈခုခုပေါ့
အခု Trend ကိုအားပေးနတေဲ့စာဖတျပရိသတျကွီးအတှကျ ဘဝထဲကနေ ဖယျကိုထုတျထားသငျ့တဲ့ ၂၀၁၉ ထိသယျဆောငျမထားသငျ့တော့တဲ့အရာလေးတှကေို ပွနျပွီးပွောပွမြှဝပေေးခငျြပါတယျ။ဘာတှလေဲဆိုရငျ
ဆိုရှယျမီဒီယာလောကကို တအားဖကျတှယျမိနတေဲ့အခါ အပွငျလောကနဲ့အဆကျပွတျသှားတတျပါတယျ။အပွငျလောကက မိတျဆှသေူငယျခငျြးတှေ၊မိသားစုတှနေဲ့ရငျးနှီးမှုကိုလြော့သှားစပေါတယျ။အဝေးရောကျနတေဲ့မိတျဆှသေူငယျခငျြးတှနေဲ့အဆကျအသှယျမပွတျရှိတယျဆိုပမေဲ့ သခြောအသုံးမခတြတျရငျ ကိုယျ့ဘကျက ဆုံးရှုံးမှုတှကေပိုမြားပါတယျ။ဒီတော့ ဖုနျးမှဖုနျး၊ဖဘှေ့တျချမှဖဘှေ့တျချဖွဈနတေဲ့စိတျလေးကို ဖွညျးဖွညျးခငျြးလြှော့ခပြွီးလကျတှဘေ့ဝကလူတှကေို ပိုပွီးအခြိနျပေးကွညျ့ပါ။သငျ့ရဲ့ ၂၀၁၉ က ပိုပွီးအဓိပ်ပာယျရှိလာပါလိမျ့မယျ။
လူတိုငျးမှာ မနာလိုတဲ့စိတျကတော့ တဈခါတဈလဖွေဈတတျကွတာပါပဲ။ဒါပမေဲ့ သူမြားကို အလှနျအကြှံမနာလိုဖွဈ၊မကောငျးပွောတဲ့အထိ မဖွဈရငျတော့အကောငျးဆုံးပါနျော။သူမြားကို မနာလိုဖွဈတာက ကိုယျ့စိတျလညျးပငျပနျးပွီး တဈခွားသူအမွငျမှာလညျး ကိုယျက သဘောထားသေးသိမျတဲ့သူ၊မပေါငျးသငျ့တဲ့သူဖွဈသှားစပေါတယျ။သူမြားကို အားကမြနာလိုဖွဈပွီး လိုကျမပွိုငျပါနဲ့။ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျသာ ယှဉျပွိုငျပါ
စိတျဖိစီးမှုတှကေို ၂၀၁၉ ထိ အပါမခံပါနဲ့။စိတျဖိစီးမှုဟာ ကောငျးကြိုးထကျ ဆိုးကြိုးကိုသာပိုဖွဈစတောပါ။ဒါကွောငျ့ ဒီနှဈမကုနျခငျ စိတျဖိစီးမှုတှမေဝငျလာအောငျ၊သူတဈပါးရဲ့ မကောငျးတဲ့ဝဖေနျမှုတှကေိုလဈြလြူရှုနိုငျအောငျ နကွေညျ့ပါ။စိတျဖိစီးမှုဆိုတာ မရှိဘူးမဟုတျ ရှိလာ၊ကွုံလာရဦးမှာပါပဲ၊ဒါပမေဲ့ ကိုယျက ထိနျးခြုပျနိုငျအောငျကွိုးစားပါ။ညဘကျဆိုပုံမှနျအိပျပေးတာ၊လကေ့ငျြ့ခနျးပုံမှနျလုပျတာ၊စာဖတျတာ၊တရားထိုငျတာစတာတှကေလညျး စိတျဖိစီးမှုတှမေဝငျလာအောငျထိနျးခြုပျပေးပါတယျ။
ဖကျရှငျဆိုတာ အမွဲတမျးအပွောငျးအလဲရှိနပွေီး ဆနျးသဈနတောပါ။ဒါပမေဲ့ ပျေါသမြှတော့လိုကျဝယျနလေို့မရပါဘူး။ကိုယျ့ဆီမှာရှိနတေဲ့အဝတျအစားပုံတုံးတှကေို ရောငျးတနျရောငျး၊ပေးတနျပေးပွီး ကိုယျနဲ့တကယျအံဝငျခှငျကြ သကျတောငျ့သကျသာဖွဈစမေယျ့ အဝတျအစားမြိုးကိုရှေးခယျြ
ဝယျယူပါ။တဈခါတဈလေ လှလို့ဝယျလိုကျပမေဲ့ ကိုယျနဲ့မလိုကျဖကျတာ၊သကျတောငျ့သကျသာမဖွဈတာတှရှေိတတျပါတယျ။အဲ့ဒီလိုမြိုးကြ ငှကေုနျတာပဲအဖတျတငျမှာပါ။ဒါကွောငျ့ ဖကျရှငျကိုလညျးအမှီလိုကျလို့ ပုံတုံးတုံးတှထေားပဈခဲ့ဖို့လိုပါတယျ။အဝတျအစားလှလှလေးတဈစုံက သငျ့ကိုပိုပွီး
ကိုယျ့ဘဝထဲမှာရှိနမေယျ့လူတှဟော နညျးပါစေ တနျဖိုးရှိတဲ့သူတှခေညျြးပဲဖွဈနဖေို့လိုပါတယျ။အပေါငျးအသငျးသူငယျခငျြးတှမြေားတော့မြားပါရဲ့။တကယျတမျးကြ ကိုယျ့အပျေါမကောငျးတဲ့သူတှကေ ၁ဝယောကျမှာ၈ယောကျလောကျဖွဈနရေငျ…။တကယျတမျးကိုယျ့အပျေါ ဘယျသူက စဈမှနျတယျဆိုတာ ခှဲခွားတတျမှာပါ။အားနာမနပေဲ ဘဝထဲက ထုတျပဈခဲ့ပါ
ကိစ်စတဈခုခုကို အသငျးအဖှဲ့နဲ့လုပျတယျ။ဒါပမေဲ့ အမှားအယှငျးတဈစုံတဈခုဖွဈလာရငျ ဒါက အားလုံးရဲ့ အမှားပါပဲ။ကိုယျတဈယောကျတညျးလှတျရငျပွီးရောတဈခွားသူအပျေါအပွဈပုံခတြာမြိုး မလုပျသငျ့ပါဘူး။အဖှဲ့အစညျး၊အသငျးအဖှဲ့နဲ့လုပျတဲ့အခါ တာဝနျယူတတျတဲ့စိတျရှိတာက ခေါငျးဆောငျကောငျးတဈယောကျရဲ့စိတျပါပဲ။ဒါကွောငျ့ ကိုယျက ကွောကျလို့ဖွဈစေ၊အပွဈလှတျခငျြလို့ဖွဈစေ သူတဈပါးအပျေါအပွဈပုံခမြိတဲ့စိတျမြိုးရှိခဲ့တယျဆိုရငျ ၂၀၁၉ ထိဒီစိတျကို မသယျဆောငျသှားပါနဲ့တော့။ကိုယျ့ရဲ့ တာဝနျယူတတျတဲ့စိတျက ကိုယျ့တနျဖိုးကိုမွငျ့တကျစမှောပါ။
လူတိုငျးကတော့ ကိုယျနဲ့မရငျးနှီးတဲ့အလုပျကိုလုပျရမှာ၊ကိုယျမသိတဲ့နရောဒသေကိုပထဆုံးသှားရမှာ စိတျလှုပျရှားတတျ၊ကွောကျတတျကွတာပါပဲ။ဒါပမေဲ့ အဲ့ဒီကွောကျတဲ့စိတျကို တတျနိုငျသလောကျလြှော့ခပြွီး ဘဝရဲ့အတှအေ့ကွုံသဈတှကေိုယူကွညျ့ပါ။ကွောကျစိတျကနေ ရအောငျ
ရုနျးထှကျကွညျ့ပါ။သငျ့ကိုတကယျပြျောရှငျစတေဲ့အရာက ဘာလဲဆိုတာ ရှာဖှကွေညျ့ပါ။
မှတ်ဥာဏ်ပျောက်ဆုံးခြင်းကို ကုသပေးနိုင်တဲ့ တေးဂီတရဲ့စွမ်းအား